Kaabsol Checkweigher CMC-800 - Shiinaha HALO Pharmatech Co., Ltd
In wax soo saarka ee kaabsoosha, isbedbedelka miisaanno kaabsal inta badan dhaca oo hoos Jacayl ee aadanaha, mashiinka, wax, hababka iyo deegaanka. kaabsoosha qaarkood waa out of kala duwan ku muujiyey halis sare oo tayo leh taas oo waa in loo arkaa "waxyaabaha khatarta ah". Sidee si ay ula waxyaabaha halis badan ka qaban had iyo jeer waa madax u ah waaxda ilaalinta tayada iyo waaxda wax soo saarka.
Dhanka kale, tayada shaqo taxane CMC la Rowan kordhin karaa ay hab shaqo oo hal abuur leh - "Qaab-dhismeedka sii kordhiin unit" iyo "xidhiidha isku midka ah aan xad lahayn". Sidaa darteed, waxaa la dhexgelin karaa mishiinka wax buux kaabsal in miisaankiisu yahay kaabsal kasta oo ka soo saarka.
400 kaabsoosha / min
800 kaabsoosha / min
1200 kaabsoosha / min
n * 400 kaabsoosha / min
Size kaabsol Khusayso
oo miisaankeedu yahay Range
Previous: Kaabsol Checkweigher CMC-1200
Next: faaruqa kaabsol Sorter
Sax kaabsol Miisaankoodu
Automatic kaabsol kala saarista Machine
Device Inspection kaabsol
kaabsol Inspection Machine
Control Tayada kaabsol
kaabsol kalabuxu waxay Machine
kaabsol Machine Miisaankoodu
kaabsol Miisaanka saxe
kaabsol Miisaanka Hubinta Machine
kaabsol Miisaanka Control
kaabsol Miisaanka Inspection
High qiray kaabsol Checkweigher
High Speed kaabsol Checkweigher
Industry-Leading kaabsol Checkweigher
Pharmaceutical kaabsol Qalabka
Pharmaceutical kaabsol Machine